आधुनिक उद्योगको तीव्र विकास र जनताको जीवन स्तरको निरन्तर सुधारको साथ, प्याकिंग बक्सहरूमा जनताको माग बढ्नेछ। त्यसो भए, उपभोक्ताहरूले अब प्याकिंग बक्सहरूको गुणस्तरमा उच्च आवश्यकताहरू राख्छन्। त्यसैले यसलाई नयाँ टेक्नोलो लागू गर्नु आवश्यक छ ...
प्याकिंग बक्सको कार्य के हो?
बक्सिंग एक शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरण भएको छ। राम्रोसँग डिजाइन गरिएको प्याकेजि boxes बक्सहरूले उपभोक्ताहरूको लागि सुविधा मूल्य र उत्पादकहरूको लागि प्रचार मूल्य सिर्जना गर्न सक्दछ। विभिन्न कारकहरूले अनुप्रयोगमा मार्केटिंग उपकरणको रूपमा प्याकेजि ofको थप विकासलाई प्रमोट गर्नेछन्। अधिक र अधिक उत्पादनहरू बेचिएका रूपमा ...
उपहार बाकस बनाउन कति प्रक्रियाहरू छन्?
गिफ्ट बक्सहरू हालसालैका वर्षहरूमा बढी लोकप्रिय भएको कारण धेरै व्यक्तिहरू आफैंको गिफ्ट बक्सहरू बनाउन चाहान्छन्। दैनिक जीवनमा उच्च-अन्त उपहार बक्सहरू कागजबाट बनेका हुन्छन्, र कागज सतह अधिक प्रसंस्करणको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। जे होस् उपहार बक्सहरू सरल देखिन्छन्, यो ...